UJohn Pombe Magufuli – unyaka omuhle wabacindezeli | Scrolla Izindaba
Umholi weqembu eliphikisayo uZitto Kabwe uthe kubi kakhulu ukuthi empeleni alukho ukhetho obelukhona.
Kepha ukhetho lwasebenzela inhloso eyodwa. Umphumela – wamaphesenti angama-85 ohlekisayo kaMengameli – usho ukuthi iqembu eliphikisayo lilahlekelwe yizihlalo zalo zonke ephalamende.
Njengakwamanye amazwe, imishini yentando yeningi yayisetshenziselwa ukuqeda abaphikisi nokwakha umbuso weqembu elilodwa.
E-Russia inhlolovo ivume ushintsho lomthethosisekelo oluzogcina uMengameli uVladimir Putin esesikhundleni kuze kube ngowezi-2036.
Umholi wase-China uXi Jinping uphendule ngonya kwinhlangano yentando yeningi e-Hong Kong, wabulala inkululeko yomphakathi futhi waqeda isikhundla esikhethekile sedolobha elalikade linenkululeko.
Futhi ngeke simusho nhlobo uMengameli waseMelika uDonald Trump ngoba simnikeze indawo yakhe ekhethekile ekuhlambalazeni ohlwini lwalo nyaka.
Inhlangano elwela intando yeningi i-Freedom House ilinganisela ukuthi amazwe angama-80 asebenzise isembozo sika-Covid ukuze angabi nentando yeningi.
Linye kuphela izwe – i-Malawi – elakhululeka ngokwengeziwe.
Izitshudeni eziningi zezazi eziholayo zobushiqela zishicilele incwadi evulekile esho ukuthi intando yeningi “iyabuna noma iyawa ngokuphelele emhlabeni jikelele”.